mairie-antananarivo – Fitsidihana Boriboritany Fahaefatra
administrateur 26 janoary 2018 Commentaires fermés
Androany zoma 26 janoary 2018 no nitsidika ny sampan-draharaha misahana ny Loza voajanahary eto anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ( GRC) teny Anosipatrana ny “Plate Forme Humanitaire Secteur Privé” na ny ( PHSP ) izay nahitana ny teo anivon’ny orinasa DHL, TELMA, BFV, ary ny hafa koa.
Marihana fa fitsidihana ny tranofitehirizana ny entana izay omen’ireo Orinasa ireo novotoanton’izany izay nilazany ireto farany ny fahavononany hanampy ny Tanànan’Antananarivo amin’ny fiatrehana ny Loza voajanahary izay mety hiseho.
Maro ny solontena ny teto anivon’ny Tanànan’Antananarivo no naira nijery izany trano izany toy ny tale misahana ny Loza voajanahary (GRC) sy ireo Mpiara miasa; ny Tale misahana ny ara-tekinika (BTP) ; ny Delege misahana ny Boriboritany fahaefatra ary ny teo anivon’ny serasera ny Kaominina. Raha ny fantatra dia ho avy tsy ho ela ny fifanarahana ara taratasy izay ho ataon’ny roa tonta.